Alemaina sy Meksika: Fiombonana Ho An’ny Hoavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2016 15:12 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español
Ireo Peta-drindrina ofisialin'ny taonan'i Alemaina any Meksika. Sary an'ny mpanoratra
Ny 6 jona 2016 no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ireo asa mikasika ny “Taona Kambana” izay ahitana ny fisian'i Alemaina ao Meksika ary i Meksika ao Alemaina. Ny teny filamatra ho an'io hetsika io dia ny Alianza para el futuro na Allianzen für die künftige, midika hoe “Fiombonana ho an'ny hoavy”, izay mikasa ny hanao sehatrasa an'arivony samy hafa manodidina ny siansa, ny kolontsaina ary ny fanabeazana. Ny tanjona amin'izany dia ny mba hamoronana fifanakalozana erantany amin'ireo fahalalana eo amin'ny firenena roa tonta.
Tao anatin'ny hafany momba ny Minisitera Federalin'ny Raharaham-bahiny, nanambara i Frank-Walter Steinmeier fa:
Mpiara-miasa lehibe amin'i Alemaina i Meksika amin'ny famolavolana ireo olana erantany momba ny hoavy. Noho io antony io dia maniry ny hanitatra ny fiarahanay miasa eo amin'ny lafiny politika, teokarena sy kolontsaina izahay ary hanangana fifandraisana akaiky kokoa ho an'ny fiarahamoninay. Fahafahana iray ao anatin'io lohahevitra io ny taonan'i Alemaina any Meksika, miaraka amin'ny teny filamatra hoe “Fiombonana ho an'ny hoavy”. Maniry ny hampiseho ny fifandraisanay akaiky anatin'ireo hetsika sy tetikasa an'arivony mahery manerana ny firenena izahay, ary koa hamaritra ireo teboka iraisanay sy hampiroborobo ny fifankahazoan-kevitra eo aminay.
Raha ny marina, tao anatin'ilay lahatsoratra izay nandraisana ny “Taona Kambana”, voalaza fa ny natoralista sady mpikaroka tany vaovao, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, angamba no mpisava lalana fanta-daza indrindra amin'ny fifandraisana misy eo amin'ireo firenena roa voatanisa ireo:
“Fifandraisana ny zava-drehetra”, hoy ny voasoratr'i Alexander von Humboldt tamin'ny taona 1803, nandritra ny diany manerana ny lohasahan'i Meksika. Ary avy tamin'io fototra io no nanorenana ny fiaraha-miasa malalaka teo amin'i Alemaina sy Meksika, izay hatramin'izay dia namafisina sy nitarina, satria ankehitriny dia mahahenika ireo sehatra sahala amin'ny toekarena, ny fiaraha-miasa, ny kolontsaina ary ny siansa izany.
Maka ny hevitra tsara an'i Humbold ny Taona Kambana Alemaina-Meksika 2016-2017: fihaonana am-pitsikiana, ahitana fifandeferana sy fiaraha-misalahy eo amin'ireo kolontsaina manerantany.
Anisan'ireo hetsika ara-kolontsaina tafiditra ao anatin'ny fandaharanasan'ny “Taona Kambana” ny Herinandro faha-15 an'ny Horonantsary Alemana miaraka amin'ireo fampisehoana ao amin'ny Tranom-panjakana fijerena horonantsary sy ny Goethe-Institut, fikambanana iray tsy mampidi-bola izay manome vahana ny fampianarana ny teny Alemana manerantany sy ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Hotanterahina manomboka ny 11 Aogositra ka hatramin'ny 1 Septambra 2016 io tsingerin'ny horonantsary io.
Ankoatr'izay, mikasika ny orinasa, hisy ny fampirantiana Vita avy any Alemaina, izay hatao ao amin'ny World Trade Center ao Meksika, ny tapaky ny volana Jona 2016.
Sarin'ilay hetsika “Fampirantiana ny Vita avy any Alemaina”. Gerhart Reuss, nalaina tao amin'ny vohikala http://www.alemania-mexico.com, nampiasaina teo ambany fahazoan-dàlana.
Manana kaonty ofisialy ao amin'ny Twitter ny Taona Kambana, izay natao hanolorana ireo sehatrasa maro ao anaty fandaharana:
¿Qué hace la Cooperación Alemana en Mex en biodiversidad? https://t.co/E6WaUjTQTa #SemanaDeLaSustentabilidad #alemx pic.twitter.com/rPZP6LOo4k
— Alemania México (@AlemaniaMx) June 17, 2016
Inona ny Fiaraha-miasa an'i Alemaina amin'i Meksika mikasika ny zavamanan'aina isan-karazany? #SemanaDeLaSustentabilidad #alemx
Manararaotra io hetsika io anehoany ny fomba andraisany anjara amin'ireo hetsika ireo mpampiasa io tambajotra io, na koa entiny manasa ny hafa hanatevin-daharahana:
Ven a la @ExpoAlemania y conoce los beneficios de la formación profesional dual @AlemaniaMx @RedxlaEducacion pic.twitter.com/LsF72L7FZa
— Sigfried Eisenmeier (@SEisenmeier) June 18, 2016
Tongava any amin'ny Fampirantian'i Alemaina ary fantaro ireo tombontsoan'ny fampiofanana arak'asa iarahan'ny roa tonta @AlemaniaMx @RedxlaEducacion
Sólo porque es el año dual, apoyo a Alemania para que gane la #Euro2016 #alemx
— E Páramo (@Param0_) June 20, 2016
Noho ny Taona Kambana fotsiny ihany dia manohana an'i Alemaina mba hahazoana ny #Euro2016 #alemx
Ao anatin'ny ampahany manaraka, hanao tatitra momba ireo sehatrasa izay ataon'i Meksika any amin'ny tany Alemana isika, natin'ny fanamarihana “Taona Kambana”. Tamin'ny taona lasa, nanana fiaraha-miasa mitovitovy tamin'io tamin'i Angletera i Meksika.